Spider-Man vaovao dia avy amin'ny tanan'ny Gameloft | Androidsis
Gameloft dia nanambara Spider-Man vaovao ao amin'ny Comic Con
Raha amin'ny lalao video isika dia miresaka momba ny E3 ho foibe lehibe manerantany ary amin'ny telefaona finday dia manao toy izany amin'ny IFA any Berlin na ny MWC any Barcelona, ​​ny Comic Con no zava-dehibe indrindra ho an'ireo tia horonantsary. andian-tantara na tantara an-tsary fa ao anatin'io atiny io dia misy ifandraisany amin'ny videogames sy ny hafa koa resahina sy aseho. Noho izany, tamin'ny andiany farany natao tany San Diego, afaka nahafantatra momba ny tetikasa samihafa izahay amin'ny ho avy ary, mazava ho azy, nahita ihany koa izahay Gameloft.
Ny orinasa frantsay goavambe dia nanambara fa, miaraka Marvel, dia miasa amin'ny fanombohana amin'ny ho avy, miaraka amin'ny tanjona volana septambra, an'ny lohatenin'ny Spider-Man mbola tsy misy anarana voafaritra. Fantatsika fa ny tanjon'ny studio sy ny trano misy ny hevitra, araka ny ahafantarana an'i Marvel, dia ny hamelona indray ny toetra amam-panahy izay, nandritra ny fotoana kelikely, dia mijanona ao ambadiky ny sary masina Marvel toy ny Iron-Man., Thor na Wolverine, mandeha lavitra kokoa, noho ny, azo inoana kokoa, ho an'ny andian-tsarimihetsika izay mamela be dia be tadiavina.
Momba ny lalao, fantatray fa hahazo aingam-panahy izy ireo amin'ilay andian-tantara an-tsary Spider-man tsy voafetra ary miasa izy ireo amin'ny fametahana plethora tsara amin'ny atiny mahazatra toy ny fahavalon'ny toetran'ny Green Goblin, ny Vult na Electro, ary koa ny akanjo tsy manam-petra ho an'ny lehilahy hala. Ny mekanika, araka ny hita amin'ny tranofiara, dia hampifangaro ireo mpihazakazaka tsy misy farany, lalao ady ary zavatra mitovy amin'ny piozila mihetsika. Toa mampidi-doza sy be faniriana ilay sosokevitra, raha tsy hilaza afa-tsy izay. Manantena aho fa tsy hiafara amin'ny fahasimban'ny antsipiriany toy ny maodelin'ny orinasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Gameloft dia nanambara Spider-Man vaovao ao amin'ny Comic Con
RE-VOLT 2: Multiplayer azo alaina ao amin'ny Play Store
Wallapop, endrika vaovao amin'ny sehatry ny varotra an-tserasera amin'ny Android